A ọhụrụ oge nke n'ụzọ-Electric Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Na-emekarị, ruru ka size na arọ nke skateboards ebu ha bụ a okwu. Anyị Germany dabeere ukwuu n'ime mkpara ama ogologo ọchịchọ ịmata banyere "electro-agagharị", nke a nnukwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nchegbu na Germany na n'ezie na obodo nile niile site Europe. Anyị na-enye praịm-notch asịwo enyemaka dị ka ihe n'ụzọ dị irè na-ị na elu na-arụ ọrụ ma ma ọ bụ na ị na-a nlereanya ọhụrụ asịwo ma ọ bụ a n'ikpeazụ otu! All oge na-eyi a okpu agha, nakwa dị ka ndị ọzọ na-anabata nche gia (eg Mbuọtidem na mpaghara gị iwu, o nwere ike ga-etinye na a okpu agha mgbe nọkwa. Mkpa aka rụọ ihe electric skateboard ? KOOWHEEL mbanye bụ a mountable electric mbanye na odomo ọ bụla mgbe skateboard n'ime ihe electric skateboard - n'ime nkeji. Na usoro nke iche, ọ na-aga na si na-asị na ibu nso, na elu n'ihi na ị nwere ike kwere ka cowl ikpọ anya enweghị mkpa fanye ya kwa 10 nkeji. Enweghị ihe ọ bụrụ na ị na-achọ a ohuru ego n'ụzọ nke iga ma ọ bụ dị nnọọ mkpa na-atọ ụtọ, ndị Koowheel ugbo agha ga-enye gị ihe kasị mma nke iji atụrụ.
Koowheel ugbo agha magburu onwe pụta nwetara ebe a ka a na anya, na-eche echiche na uru, nke bụ ọnụ karịa ọtụtụ ndị ọzọ na electric skateboards. The Koowheel ejikwara tinye n'ọrụ a handheld remote njikwa nke ọzọ isi nke moto ike na nke ahụ bụ brushless. Dị ka a dochie anya, ọ na-enye nwa afọ ọchịchị ikike iji chọpụta ma ma ọ bụ na-ekwe ka nka na ha akpan akpan onye obodo. Koowheel aghụghọ praịm àgwà na oké arụmọrụ electric skateboards maka obodo ụgbọ njem na egwuregwu na-eme Fans. Koowheel enye ihe electric skateboard na-apụghị ichetụ n'echiche uru na a mpi nkwa na ọnụ akwụ ụgwọ. M omiiko banyere uru nke na-ewere ihe ize ndụ - na a ụwa na-prefers anyị ekwesịghị. Nke a na-enyere gị nyochaa batrị ogo, nke mere na ị na-ahụ onwe gị na a na-abaghị uru skateboard bụla batara. Otu ihe dị mkpa mmiri nke na electric skateboard ngwá bụ batrị maka powering na motored skateboard, na njikwa maka osooso na braking, isi-arịọnụ osisi na a chaja maka recharging batrị.
The ihe abụọ dị mkpa moto iche echiche ebe a nwere ike ịbụ na-wheel ehiwe Motors ma ọ bụ belt kewapụrụ ha. Anyị Electric Skateboard Kit ga-enyere mee ka usoro a dị mfe. A, e nwere electric skateboards na na-n'okporo ámá electric skateboards. Ebe ọ bụ otu n'etiti ndị m kacha ekpo ọkụ ugbu na ọtụtụ na-ele posts, a ọtụtụ ndị gwara m na nzaghachi na e nwere ndidi ụfọdụ n'ezie mma mbadamba kọrọ. Otú o sina dị, mgbe ndị na mmepe nke mmanụ ụgbọala kwadoro skateboards, na e nwere a ọma ole na ole na-akpata nke mere ka ndị a motorized mbadamba iwu dị ka: mkpọtụ emepụta site na engines na mmanụ ụgbọala engines na e eke mmetọ.
Ịchụso chọpụtara nnọọ mma electric skateboard na-aga n'ihu, njikere chọpụta? KOOWHEEL skateboards mix omimi nke oké sports-eme na kpochapụwo obi ụtọ nke skateboarding ụgbọ mmiri onye nke kasị mma ume-ebi ebi na ahụmahụ dị! Right now m na-ebu, na m na-ele, 10 kasị ukwuu skateboards maka kwa ụbọchị iji. Top-nke na-akara enyocha emepụta maka 2018 bụ Koowheel. Ọ na-enye nkịtị ọsọ 30km / h, top ọsọ 45km / h, na-aga ngwa ngwa, na i nwere ike ikpuchi gburugburu 20 na 25 km na otu batrị ụgwọ. The ugbu batrị 20pcs18650 High ọnụego lithium mkpụrụ ndụ.
Post oge: Feb-06-2018